လှိုင်သာယာရှိငှါးရန်လုံးချင်းအိမ်များ | iMyanmarHouse.com
FMI City လုံးချင်အငှား
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19774033 အတွက် Aung Khaing Khant Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09987922969, 09424469982, 09259636087
FMI City လုံးချင်းအငှါး
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19780060 အတွက် Aung Khaing Khant Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09987922969, 0942446998, 09259636087
🏡 လှိုင်သာယာ FMI CITY(Fontana Garden) ခြံထဲကား(၅)စီးခန့်ရပ်နိုင်သော ပရိဘောဂအပြည့်အစုံပါ ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေ စျေးတန် လုံးချင်းအငှါး 🏡...
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19762988 အတွက် The Perfect Home Real Estate & General Services သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
FMI City 80x70..2Rc လုံးခြင်းအငှား
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19779863 အတွက် Shwe Naing Lin Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
10.50 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19779845 အတွက် Moe Myint Thu Realestate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19770914 အတွက် Aung Khaing Khant Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
FMI City အိမ်ရာအတွင်း လုံးချင်း၂ထပ်တိုက် ပြင်ဆင်ပြီး အဆင်သင့်တက်ရုံ ငှားမည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19768032 အတွက် Aung Khaing Khant Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
#FMI အိမ်ယာရှိ လုံးချင်း(၂ထပ်)တိုက်ကောင်းငှားပါမည်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19764153 အတွက် Aung Htet Aung Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19763574 အတွက် Aung Khaing Khant Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19755438 အတွက် Koe Kant Hwar Kway Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19754382 အတွက် Koe Kant Hwar Kway Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်